MyanCare | ဘယ်အရွယ်အထိ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမလဲ?
by myatlynn | Aug 11, 2020 | Child Health, Nutrition
မိခင်နို့မှာ ကလေးတွေ အတွက် အာဟာရဓာတ်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း မိခင်နို့တိုက်ကျွေးကြဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း(World Health Organization – WHO)ကတော့ ကလေးအသက် ၆လ အထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းသာ တိုက်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းလို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း တခြား ဘာအစားအစာကိုမှ မတိုက်ကျွေးရပါဘူး။ ရေတောင်မတိုက်ရပါဘူး။
ဒါ့အပြင် အနည်းဆုံး အသက် တစ်နှစ် အထိ မိခင်နို့နှင့် ဖြည့်စွက်စာတွဲဖက်ကျွေးဖို့လည်း အကြံပြုထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီတိုင်းအတွက်တော့ ကလေးကို တစ်နှစ်လုံး နို့တိုက်နေဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အချိန် သတ်မှတ်ပြီး နို့တိုက်တာတို့၊ နို့ဘူးနဲ့ အစားထိုးတာတို့ လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်။
ကလေးကို နို့တိုက်မယ်ဆို ကြုံတွေ့ရမှာတွေက….
ပညာရှင်တွေကတော့ ကလေးနဲ့ အမေ ထိတွေ့ဆက်သွယ်မှုရအောင်နဲ့ မိခင်နို့ ထွက်တာကောင်းမွန်အောင် မွေးပြီးပြီးချင်း တစ်နာရီ အတွင်း မိခင်နို့တိုက်ဖို့အကြံပေးထားပါတယ်။
ကလေး ပထမဆုံး သောက်ရတဲ့ နို့ဦးရည်ဟာ ပြစ်ပြီး နည်းနည်း ဝါပါတယ်။ နို့ဦးရည်မှာ ကလေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အာဟာရတွေ antibodyတွေများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
UNICEF (The United Nation of Children’s Funds) ကမိခင်နို့ ကို ပထမဦးဆုံး ကာကွယ်ဆေး တိုက်ကျွေးတာလို့တောင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားပါတယ်။မိခင် နို့မှာ ကလေးအသက်တစ်နှစ်လောက်အထိ လုံလောက်တဲ့ antibodyတွေ ပါ ပါတယ်။ အဲ့ဒီantibodyတွေက ဝမ်းလျှောတာ၊ နားပိုးဝင်တာ၊ နဲ့ အခြား ကျန်းမာရေးပြသနာ တော်တော်များများ ကို ကလေးမှာ မဖြစ်အောင် အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။
မိခင်အနေနဲ့ ကလေးကို နို့တိုက်တဲ့အခါ oxytocin နဲ့ prolactin တို့လို ဟော်မုန်းတွေထွက်ရှိပါတယ်။ အစရှိတဲ့ ဟော်မုန်းတွေက မိခင်ကို ပျော်ရွှင်ပီတိဖြစ်စေတဲ့ ခံစားမှုကို ရရှိစေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သားအိမ်ကိုလည်း ပုံမှန်အနေအထားမြန်မြန် ပြန်ရောက်စေပါသေးတယ်။
ကလေးကို နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဟာ တစ်ရက်ကို ကယ်လိုရီ ၄၀၀-၅၀၀ လောက်ကုန်ပါတယ်။ မိခင်တွေအနေနဲ့ နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန် မတိုးအောင် ထိန်းလို့ရပါသေးတယ်။
နို့တိုက်ကျွေးခြင်းအားဖြင့် မိခင်မှာ ဆီးချိုတို့ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ နှင့် ကင်ဆာ ရောဂါ(နို့ကင်ဆာ၊ သားဥကင်ဆာ၊သားပြွန်ကင်ဆာ၊သားအိမ်ကင်ဆာ) စတာတွေ ဖြစ်ဖို့ လျော့ကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းတိုက်ကျွေးခြင်းက မျိုးဆက်ခြားကျန်းမာရေးကိုလည်း အထောက်အကူပေးပါသေးတယ်။
ကလေးအသက် ၆လ ကျော်ပြီဆို မိခင်နို့အပြင် အခြားဖြည့်စွက်စာတွေကိုပါ တွဲဖက် ကျွေးရတော့မှာပါ။ မိခင်နို့ကဆက်တိုက်နေပါ။ WHOကတော့ အနည်းဆုံး ကလေးအသက် တစ်နှစ်ထိ မိခင်နို့နဲ့ ဖြည်စွက်စာ တွဲတိုက်ကျွေးဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
မိခင်နို့ဟာ စရိတ်သက်သာပြီး အာဟာရရှိတဲ့အတွက် ဆက်လက်တိုက်ကျွေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ကလေးအသက် ၂ နှစ် ကနေ ၄ နှစ် အတွင်းမှာ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး နို့ဖြတ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
ကလေးကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဆေးရုံဆေးခန်းကို သွားဖို့ အခက်အခဲ ရှိနေရင် ရင်သွေး call center ကို သတိရလိုက်ပါနော်။